नेकपा नाम ओली–प्रचण्ड दुबै समूहले नपाउने सर्वोच्चको फैसला
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » नेकपा नाम ओली–प्रचण्ड दुबै समूहले नपाउने सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने नपाउने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णय खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा ३ जेठ २०७५ मा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि उक्त पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने. क. पा. ) राखी निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको थियो ।
त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम दिएर अर्को पार्टी दर्ता गर्न दिएको भन्दै कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर २०७५ मंसिर ५ गते रिट दर्ता गरेका थिए। अहिले उक्त नेकपा नै केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको एक समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधबकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको अर्को समूहमा विभाजित बनेको छ । उनीहरुबीचको आधिकारिताको विवादपनि आयोगमा पुगेको छ । अब नामको विवाद आजैबाट सकिएको छ ।